Irakiana Mpandika Tenin’ny Tafik’i Etazonia Tafahitsoka Ao Gresy Amin’Izao Fotoana Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2016 14:53 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Español, Swahili, Български, Italiano, English
Ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny Jacob Resneck ary niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Martsa 2016, ary navoaka eto noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Lehilahy 26 taona manao akanjo mihaja avy any Bagdad i Ibrahim Esmael Ibrahim. Raha nifanena taminy aho, nitsangana teo amin'ny sehatra teo amin'ny gara ao Idomeni, Gresy izy – na dia tsy misy fiaran-dalamby mandeha aza eo amin'izao fotoana izao. Miteny anglisy tsara i Ibrahim; amin'ny maha-zatovolahy azy dia nahazo asa tao amin'ny GLS ( Global Linguist Solutions ), fandraharahana iray ao Virginia nanome mpandika teny ho an'ny tafika amerikana nandritra ny ady tao Iraka.
Noho izany dia Eoropa no tiany handehanana amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny fifanarahana vaovao ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy i Torkia, dia tsy hinoana ho afaka hijanona ao izy. Ny Vondrona Eoropeana mikasa ny hamerina indray ireo mpitady fialokalofana toa an'i Ibrahim avy any Torkia nankany Gresy. Nanaiky i Torkia ny handray azy ireo hiverina ho takalon'ny 6 lavitrisa dolara amin'ny fanampiana sy ny fandrisihana hafa.